5 Ihe Nlegharị Anya na Auckland | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Auckland, Nduzi
Taa, anyị gafere akụkụ nke ụwa ọzọ, gaa na nke mara mma ma dị anya New Zealand. Ọ bụ ezie na isi obodo nke mba a bụ Wellington, obodo ya kachasị ewu ewu, yana ọtụtụ mmadụ bi na ya na etiti ego obodo. Auckland.
New Zealand nwere agwaetiti abụọ, North Island na South Island, na Auckland dị na North Island ọ bụkwa otu n’ime obodo ndị kasị buo ibu n’akụkụ a nke Pacific. Ọ bụrụ na ịmabeghị ọtụtụ ihe banyere obodo na obodo a, anyị na-atụ aro ka ịmalite na edemede a yana na n'ikpeazụ ị ga-etinye ha na ndepụta gị nke njem ndị ga-abịa n'ọdịnihu Ọ bụ nnukwu njem njem!
1 Ebe nkiri Auckland
2 Kayaking gaa n'àgwàetiti mgbawa
3 Gaa na osimiri Auckland
4 Gafee mba na awa ise nke ịgagharị
5 Gaa na ịchọpụta agwaetiti Rotoroa
6 Gaa Leta ogige kachasị nke penguuin n'ụwa
Ebe nkiri Auckland
Obodo ọ dị n'okirikiri ala, n'agbata ugwu na n'etiti mkpọmkpọ ebe ugwu 48 na-agbọpụ ọkụ, ọdụ ụgbọ mmiri, ọdọ mmiri, agwaetiti na mmiri eke. Kporie nwayọọ summers na okpomọkụ na-adịkarịghị gafere 30 ºC, na adụ oyi na ọ bụghị ezigbo oyi. Ee n'ezie, mmiri na-ezo n’oge niile n’afọ ma ọ ka na-ejikwa na-nkezi obodo nwere ọtụtụ awa nke anwụ na-acha.
Locatednọ na mpaghara mara mma dị otú ahụ ebe nlegharị anya kachasị na njem ndị a na-eme n'èzí ya mere anyi ga etinye uche na nke a:
Kayaking gaa n'àgwàetiti mgbawa
Kayak bụ maka ịgbazite ma weta paddled na ndụ jaket. Echiche bụ banye ụgbọ mmiri gaa agwaetiti Rangitoo, agwaetiti mgbawa ugwu ma ọ bụ ugwu na-agbọpụ ọkụ nke na-adịghị nso n’etiti Auckland. Mgbe ị na-agbazite kayak, enyere gị obere njem gafee ọdụ ụgbọ mmiri nke Waitemata ma echefula na penguins na-acha anụnụ anụnụ, dịka ọmụmaatụ, nke na-eme ka ije dịkwuo ụtọ. O doro anya, ị nwere onye ndu na-eduga ìgwè nke ndị na-eme njem. Enweghị mkpa iche!
Agwaetiti Rangitoto bụ nke kasị nta na nke ọdụdụ na mgbawa ugwu mgbawa gburugburu obodo ahụ. Have nwere njem otu awa gaa n'elu, site na ebe echiche dị ukwuu, 360,. Ojuju. Laghachi n'ụsọ osimiri nri ehihie so na njegharị. Njegharị a taa na-efu $ 185 NZ dollar wee pụọ na elekere anọ nke ehihie iji laghachi naanị na 4:10 pm. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na njem mmụta ahụ, dee ozi ndị a:
Osimiri Auckland Kayaks, Tamaki Drive 384, St. Heliers, Auckland. Lọ ahịa ahụ mepere site na 8 ruo 7 elekere ma nwee ebe nrụọrụ weebụ ịkpọtụrụ.
Gaa na osimiri Auckland
Auckland O nwere osimiri mara mma na nke ọla edo di n’akụkụ ọwụwa anyanwụ yana n’ụsọ ọdịda anyanwụ ya nwere osimiri ndị ọzọ dị ndụ, nwere aja ojii dị mma maka sọọfụ. I nwere ike ịnụ ụtọ anyanwụ n'ụtụtụ na nke mbụ na n'ehihie n'abalị na nke abụọ.
Northga n’ebe ugwu, ị banyere na mpaghara Matakana ma ebe ahụ ị ga-abanye n’ime Omaha, Tawharanui na Pakiri osimiri. Ha bụ ndị a kacha eleta n’oge ọkọchị. N’etiti Matakana na Auckland e nwere osimiri osimiri dị kilomita-atọ, dị mma maka igwu mmiri na ọtụtụ ọrụ mmiri, nke a na-akpọ Orewa.
Ekem ke edem usiahautịn n'ụsọ oké osimiri nke etiti obodo bụ Pohutukawa Coast na osimiri Omana na Maraetai. Ma ịchọrọ sọfụ, sunbathe ma ọ bụ naanị nwere picnic na-ele ndị ntuziaka, ndị a bụ ebe kachasị mma.
Gafee mba na awa ise nke ịgagharị
Kedu mba gafere site n'ụsọ oké osimiri gaa n'ụsọ oké osimiri n'ime awa ise? New Zealand, na elu nke Auckland. Nke ahụ ọ bụ n'oge a obodo ahu pere oke oke igirita site n’otu oke osimiri ruo na nke ozo n’ime nanị awa ise nke ịgagharị. Njem ahụ malitere na Harbor Viaduct, nke dị n'ụsọ oké osimiri ọwụwa anyanwụ Auckland, na-agafe ebe ndị mepere emepe, ogige ntụrụndụ na ugwu mgbawa na-adịghị mma iji mechaa 16 kilometa ụzọ N’ọdụ ụgbọ mmiri Manukau, n’akụkụ ọdịda anyanwụ.
Thezọ ahụ gafere n'ogige mahadum nke Mahadum Auckland, ọdọ mmiri ndị gara aga na ọbọgwụ, ebe a na-ama ama na Winter Gardens, na Auckland Museum, Ugwu Eden, ugwu kacha ochie na ugwu mgbawa n'obodo ahụ na 196 mita elu, site na oge ochie Maori na site na ebe ndị ọzọ metụtara na akụkọ ihe mere eme nke colonial.
E nwere ihe ịrịba ama na-egosi ụzọ nanị ihe ị ga-eme bụ iweta mmiri na nri. Na akpụkpọ ụkwụ dị mma.
Gaa na ịchọpụta agwaetiti Rotoroa
Agwaaraghachiri ndị ọbịa n'agwaetiti ahụ na 2005. Ọ bụ paradaịs nkịtị nke mechiri kemgbe otu narị afọ yabụ ọ bụrụ na ịnọ na Auckland gbaa mbọ leta ya. Bata n'ụgbọ mmiri site na etiti Auckland, na ije ije 75, na mgbe ị rutere ị nwere netwọk okporo ụzọ, ụlọ akụkọ ihe mere eme na osimiri mara mma.
N'etiti ụlọ ndị ahụ, enwere ụlọ ụka ochie, ụlọ mkpọrọ, ụlọ akwụkwọ, ha niile gbanwere ụlọ ihe ngosi nka na ebe ngosi. Ọ dị hectare 82 na akụkọ ahụ na-agwa anyị na Salvation Army zụtara ya site na ezinụlọ nwere ya iji wuo ụlọ ọgwụ na mmanya na-edozi mmanya pụrụ iche maka ụmụ nwoke.
Closedlọ ọrụ a mechiri na 2005 na 2008, n'oge a malitere ịmalitegharị ụlọ na weghachite ụlọ ndị ahụ. Na 2010 ọ bụ n'aka obodo ahụ na 2011 ọ meghere ọha na eze. Agwaetiti Ọ na-emeghe site na ọwụwa anyanwụ ruo ọdịda anyanwụ mana ụlọ ndị ahụ na-emeghe site na 10 n'ụtụtụ ruo na 5 na mgbede.
Gaa Leta ogige kachasị nke penguuin n'ụwa
I nwere ike ime nke a na SEA Ndụ Aquarium Kelly Tarlton. Ga-ahụkwa dragọn oké osimiri, stingrays, na ọtụtụ, ọtụtụ sharks. Nwere ike ịlele ha ka ha na-eri nri ma hụ sharks dị nso na ọrụ a na-akpọ Shark Dive Xtreme na onye ọzọ akpọrọ Shark Cage. N'ime akwarium, enwere ihe ngosi 30 na anumanu di ndu, ha nile bi ebe ha. Ọ bụrụ n'ịzụta tiketi n'ịntanetị ị kwụọ ya 31 dọla New Zealand.
Osimiri, ndụ anụmanụ, na-ejegharị, na-agagharị n'oké osimiri. Ihe niile anyị nwere ike ime na Auckland na ọ bụghị naanị ya, enwere ọtụtụ agwaetiti, enwere ebe ngosi ihe mgbe ochie, enwere ije, nwe ụlọ mmanya na ụlọ nri nke na-agbakwunye n’ihe anyị na-eme n’ụbọchị mgbe anwụ chachara mechara, ọkụ na-enwu ma ndị mmadụ pụọ na-ekpori ndụ abalị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Auckland » 5 njem nleta na Auckland